AlShabaab oo weeraray magaalada Jowhar iyo qasaaro laga soo sheegayo – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaAlShabaab oo weeraray magaalada Jowhar iyo qasaaro laga soo sheegayo
AlShabaab oo weeraray magaalada Jowhar iyo qasaaro laga soo sheegayo
16/10/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Al Shabaab ayaa xalay saq dhexe waxa ay weerar kedis ah ku qaadeen bar Kontarool oo ku taalla dhinaca Koonfureed ee magaalada Jowhar, sida ay inoo sheegeen ilo xog ogaal ah.
Dadka degaanka ayaa Warbaahinta waxa ay u sheegeen inta uu iska hor imaadka socday inay maqleen rasaas xoogan oo ciidamada Kontoroolka joogay iyo Shabaabka weerarka soo qaaday ay isweedaarsadeen.
Khasaaraha horudhaca ah ee dagaalkan aan ka helnay ayaa waxa uu yahay dhimashada Hal askari oo ka tirsanaa ciidanka Kontoroolka joogay iyo dhaawaca mid kale, iyada oo aan la xaqiijin khasaaraha gaaray Al Shabaab.
Barta koontarool ee la weeraray ayaa waxa ay ku taallaa meel aan ka fogeyn madaxtooyada maamulka Hirshabeelle oo uu degen yahay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare, guriga madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan.
Weerarka Al Shabaab ay ku qaadeen magaalada Jowhar ayaa wuxuu ku soo aaday xilli shalay magaaladaasi uu booqasho ku tagay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ay ka mid ahaayeen wasiirka amniga iyo taliyaha booliska Soomaaliya.
Wararkii ugu dambeeyay ee aan saakay ka heleyno magaalada Jowhar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay baaritaan dabagal ah ka wadaan Kontoroolka ay Al Shabaab soo weerareen, waxayna ku raadjoogaan xubnaha weerarka soo qaaday.
Dowlada Soomaaliya oo ka hadashay sababtii ay u tageertay dowlada Sacuudi Carabiya
One soldier killed in Al-Shabaab Attack on Jowhar town